ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲ - ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ဖို့ မဟာ...
26 มี.ค. 2562 - 01:59 น.
တနင်္ဂနွေနေ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ် ပရာယွတ် ချန်အိုချာ မဲလာပေးစဉ်
ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးနိုင်သူ သန်း ၅၀ ကျော်ရှိပါတယ်။
မဲရေတွက်ပုံ အရှုပ်အထွေးတွေကြားမှာပဲ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က တနင်္လာနေ့ နေ့လယ်မှာ ကနဦးရလဒ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးမှ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ နောက်ဆုံးတရားဝင် ရလဒ်ကို မေလ ၉ ရက် မတိုင်ခင် ကြေညာမှာ မဟုတ်သေးဘူးလို့ ကော်မရှင်က ဆိုပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲ - ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ဖို့ မဟာမိတ်တွေနောက် အပြိုင်လိုက်ရမယ့် ပါတီကြီးနှစ်ခု